Fusion Multi-Dimensional ▏Fomba ahoana ny radara amin'ny onjam-peo milimetatra manampy fanampiana azo antoka ho an'ny Heavy Equipment-News-Hunan Nanoradar Science & Technology Co., Ltd.,
Fangaro amin'ny habaka dimam-pandefasana ▏How onjam-piraofan'ny fantsim-piterahana dia manampy fanampiana azo antoka amin'ny fitaovana Heavy
Fotoana: 2019-11-26 Hits: 89
Rafitra rafitra: natao teo anelanelan'ny ...
Fampidirana ny rafitra:
Ny vahaolana "1 + N" ho fisorohana ny fifandonana amin'ny fitaovana mavesatra, izay mametraka elanelam-potoana 77GHz eo anoloana sy singa maromaro eo anilany, dia afaka mahatsapa ny asan'ny FCW, RCW 、 BSD / LCA. Voavaha ny fahasahiranana hisorohana ny fifandonana amin'ny famolavolana rafitra ADAS an'ny fiara mavesatra haingam-pandeha.
Ity tetika ity dia azo ampifanarahana tsara arakaraka ny faritra misy azy, ary ny haavon'ny fanairana dia azo apetraka arakaraka ny halavirana, manome fampitandremana mialoha ny feo sy ny photoelectric, izay afaka manafoana ireo loza miafina, misoroka loza ary miantoka ny fiarovana.
Ahoana ny fomba hisafidianana radar onja milimetatra?
SR73-F no radara fanoherana fifandonana fohy 77GHz farany teo. Ny antena dia mandray ny volavolan'ireo mpandray marobe marobe ary mamoaka tanjona 64 miaraka amin'izay, miaraka amin'ny halaviran-dàlana 40 metatra, zoro 120 ° sy zoron'ny zoro ± 0.5 °.
Nasongadiny tamin'ny habe kely, zoro lehibe, fanoherana mahery vaika, fitoniana avo lenta, fampidirana mora ary fampisehoana vidiny lafo.
Izy io dia afaka mamaly ny fangatahana fitomboana haingana amin'ny fanampiana ny fiarovana amin'ny sehatry ny fitaovana mavesatra haingam-pandeha sy ny robot.
Nanoradar, naorina tamin'ny taona 2012, dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana, famokarana sy famarotana radar onja milimetatra ho an'ny fiarovana, UAV, otomotiko, fifamoivoizana marani-tsaina ary fampiharana hafa indostrialy. Ny vokatrao dia mandrakotra tarika 24GHz, 77GHz, 79GHz. Nahomby ny modely marika MMW 10+. Ahitana 30-450 metatra ny valim-panafody hita an'i Nanoradar. Mahatratra hatrany amin'ny 85% ny marina ho an'ny radarin'ny fiarovana mba hamantarana ny mpandeha an-tongotra. Amin'ny maha mpanamboatra radar an'habakabaka an'i MMW any Sina, ny vokatra Nanoradar dia nanaiky tsara amin'ny tsena avy any ivelany toa an'i Etazonia, Korea, UK ary Frantsa sns.
PREV: Nanoradar dia manasa mpiara-miasa hiaraka aminay amin'ny CPSE 2019 any Shenzhen China